ဒါကြောင့်ဆိုဖာမှကြွလာသောအခါ, အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသင်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်စိတ်ထဲတွင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်, စတိုင်လ်, ပစ္စည်း, လက်မှုပညာ, နှင့်အခြားသူများ. ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုသောစတိုင်များရှိသည်. သို့သော်, ဆိုဖာစတိုင်လ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခြေခံသုံးခု. ဤရွေ့ကားလက်နက်တို့ပါဝင်သည်, နောက်ကျော, နှင့်ဆိုဖာ၏ခြေထောက်, မသက်ဆိုင်ပါကရေတပ်အပြာထောင့်ဆိုဖာဟုတ်မဟုတ်. နောက်ကျောကနေ, လက်နက်, စကတ်, ထိုင်ခုံ, စသည်တို့, အပြာရောင်ကတ္တီပါဆိုဖာနှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များပေးသည်။.
ဒါကြောင့်ဆိုဖာမှကြွလာသောအခါ, အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသင်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်စိတ်ထဲတွင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်, စတိုင်လ်, ပစ္စည်း, လက်မှုပညာ, နှင့်အခြားသူများ. ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုသောစတိုင်များရှိသည်. သို့သော်, ဆိုဖာစတိုင်လ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခြေခံသုံးခု. ဤရွေ့ကားလက်နက်တို့ပါဝင်သည်, နောက်ကျော, နှင့်ဆိုဖာ၏ခြေထောက်, မသက်ဆိုင်ပါကရေတပ်အပြာထောင့်ဆိုဖာဟုတ်မဟုတ်. နောက်ကျောကနေ, လက်နက်, စကတ်, ထိုင်ခုံ, စသည်တို့, more descriptions are given to peruse aboutanavy blue velvet sofa. There isawide range of classic and favorite styles, of which the five most popular styles are sectional, sleeper, ရိုးရာ, love seat, and chaise.
Then we'll talk about the most important loveseat, navy blue corner sofa that has become popular today. The popularity may result from its requirement for lesser space inasmall room. အပြင်, the sofa surface is made of crushed velvet fabric which gives the one on the sofaawarm and soft feeling. ဖုန်ထူသောကူရှင်များနှင့်နောက်ကျောဖောင်းဖောင်းများသည်ကျယ်ပြန့်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သောလက်မောင်းကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားသည်, make every family full fill in all-around comfort.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ် lob ည့်ခန်း
ပစ္စည်း: သားရေ; အထည်; Arcylicl ခြေထောက်; သစ်သားအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ; High-density foam
function ကို: ထောင့်ဆိုဖာပတ်ပတ်လည်
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 789/413L ကို * 104W * 78 / 86H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 794L ကို * 109W * 83H